Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 7-20-21 - iHorror
Mbido Ihe nkiri egwu Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 7-20-21
Tightwad Terror Tuesday - Ihe nkiri efu maka 7-20-21
by James Jay Edwards July 20, 2021
by James Jay Edwards July 20, 2021 1,313 echiche
Hey Tightwads! Kedu maka okpomoku a? Mee ka obi jụrụ gị site n'ime ka ị nọrọ na fim ndị a sitere na Tightwad Terror Tuesday na iHorror.
American Mary (2012), site n'ikike Alameda Entertainment.
Mary onye America
Mary onye America bụ gbasara nwa akwụkwọ na-amụ gbasara ahụike nke na-agụ akwụkwọ ka ọ wee bụrụ dọkịta na-awa ahụ. N'ịbụ onye ji ụgwọ, ọ na-efesi ike ka ọ bụrụ onye dọkịta na-awa plastik dị n'okpuru ala nke ga-arụ ụdị mgbanwe dị iche iche na ndị ọrịa ya… ọ bụrụhaala na ọnụahịa ahụ ziri ezi.
Ihe egwu a nke 2012 bu ihe anakpo Cronenberg nke aru ojoo. Ewezuga na ọ bụ ndị Soska Sista, Jen na Sylvia duziri ya. Katharine Isabelle kpakpando na ndu ndu. Nwee anya Mary onye America Ebe a na TubiTV.
The Innkeepers (2011), site n'ikike Magnet Releasing.
Ndị na-echekwa ihe
Ndị na-echekwa ihe bụ banyere ndị ọrụ abụọ n'oge ngwụsị izu ikpeazụ nke ụlọ nkwari akụ ochie. E kwuru na a na-achụ ụlọ ndị ọbịa ahụ, ma ndị ọrụ abụọ anabatala aha ọma. Mgbe onye na-emebu ihe nkiri / onye na-ajụ ase ugbu a na-enyocha, ụzọ ndị mmụọ ịchụ nta ahụ kpebiri ime obere nkụda mmụọ nke onwe ha.
Nkwonkwo 2011 Ti West a bụ ihe nkiri mara mma. Ndị ọrụ ahụ gụnyere Sara Paxton na Pat Healy dị ka ndị ọrụ, yana Kelly McGillis dị ka clairvoyant. Lelee agba ikpeazụ ahụ anya, ikekwe ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ịchọrọ - enwere ihe na-adịghị mma n'ebe ahụ. Lelee Ndị na-echekwa ihe Ebe a na Vudu.
Zombeavers (2014), site n'ikike Freestyle Releasing.
Zombeavers bụ kpọmkwem ihe ị chere na ọ bụ. Ọ bụ ihe nkiri 2014 banyere otu ụmụaka na-aga ụlọ dịpụrụ adịpụ na ọdọ maka ngwụsị izu nke mmekọahụ na booze. O di nwute na ha, ọdọ na-ekpuchi oke nke zombie beavers - zombeavers, nweta ya?
Ihe egwu a dị egwu dị ka nzuzu dịka ọ na-ada, mana ọ bụrụ na ị na-achọ ọchị, nke a bụ ya. Ọ bụkwa ezigbo mic dobe maka ndị egwu egwu na-arịa ọrịa nke zombies. Ihe nkiri a gụnyere ụmụ ada na-arị elu Cortney Palm, Lexi Atkins, na Rachel Melvin, mana onye! nke ahụ bụ John Mayer? Lelee Zombeavers Ebe a na Tubi TV.
Dark Skies (2013), site n'ikike Dimension Films.
Igwe gbara ọchịchịrị
Igwe gbara ọchịchịrị bụ 2013 ihe nkiri sci-fi egwu banyere ezinụlọ ndị na-ahụkarị na ndị bi na mpaghara na-ebi na mpaghara ndị agbata obi. Mgbe ọtụtụ ihe ndị na-edoghị anya, ezinụlọ ahụ na-ebido iche na ọ ga-abụ ihe ọjọọ. Na na ihe ọjọọ nwere ike si n'ofè kpakpando…
Dị ka ihe nkiri ịtọrọ mmadụ na-aga, Igwe gbara ọchịchịrị dị mma, otu n'ime ha. Emere ya nke ọma, mana ọ nweghị ihe a na-emebeghị. Ihe nkiri a gụnyere Keri Russell, Josh Hamilton, na JK Simmons, yabụ na-enweta ya. Nweta Igwe gbara ọchịchịrị Ebe a, dịkwa na TubiTV.
Childrenmụaka (2008), site n'ikike Ghosthouse Underground.
Childrenmụaka bụ akụkọ banyere ezinụlọ abụọ na-aga otu obodo dịpụrụ adịpụ maka ezumike oge oyi. Ozugbo ọ bụla, ụmụaka niile na-arịa ọrịa - wee gbanwee igbu ha ma wakpo ndị okenye.
Nke a bụ ihe a ga-ahụ maka ndị na-atụ egwu ụmụaka a na-elegharakarị anya. Kidsmụaka na-egbu ọchụ dị egwu, mana ihe nkiri 2008 a nke Britain na-atụgharịkwa n'ọtụtụ ọnọdụ nke ime ihe ike bụ ndị kwesịrị ekwesị. Ọ na -ejikwa mmetụta uche dị egwu ntakịrị n'ihi na, nke ọma, ndị a bụ ụmụaka… kedu ka ị ga-esi kwụsị ha igbu mmadụ n'emebighị ụmụaka ịmegbu onwe gị? Chọpụta otú ndị okenye nọ na fim ahụ na-eme ya (ma ọ bụ emela ya) Ebe a, ọzọ na TubiTV.
Chọrọ ọzọ free fim? Lelee gara aga Tightwad Terror Tuesday na ebe a.
Njirimara njirimara site n'ikike Chris Fischer.